Mitemo Yekushandisa - BikeHike
Ndokumbira uverenge Chibvumirano ichi zvakanyatsonaka usati wasvika kana kushandisa Webhusaiti. Nekuwana kana kushandisa chero chikamu chewebhusaiti, unobvuma kusungwa nemitemo nemamiriro echibvumirano ichi. Kana iwe usingabvumirane nezvose zvibvumirano uye mamiriro echibvumirano ichi, saka haugone kuwana iyo Webhusaiti kana kushandisa chero masevhisi. Kana aya mazwi uye mamiriro akaonekwa sekupihwa nebhasikoro, kugamuchirwa kunogumira kune aya mazwi. Iyo Webhusaiti inowanikwa chete kune vanhu vangangoita makore gumi nematatu.
Yako bikehike.org Akaunti uye Saiti. Kana iwe ukagadzira bhurogi / saiti paWebhusaiti, iwe une basa rekuchengetedza chengetedzo yeakaunti yako uye bhurogi, uye iwe une mutoro wakakwana wezviitwa zvese zvinoitika pasi peakaundi uye chero zviito zvinotorwa zvine chekuita neblog. Iwe haufanirwe kutsanangura kana kupa mazwi akakosha kublog yako nenzira inotsausa kana isiri pamutemo, kusanganisira nenzira inotarirwa kutengesa pazita kana mukurumbira wevamwe, uye kuchovha bhasikoro kunogona kuchinja kana kubvisa chero tsananguro kana kiyi izwi rainoti harina kufanira kana zvisiri pamutemo, kana zvimwe zvingangokonzera mutoro wekuchovha bhasikoro. Iwe unofanirwa kukurumidza kuzivisa bhasikoro nezve chero kushandiswa kusingatenderwe kweblog rako, account yako kana kumwe kutyora kwekuchengetedza. bikehike haizove nemhosva kune chero zviito kana kusiiwa newe, kusanganisira chero kukuvadzwa kwechero rudzi kunoitwa nekuda kwezviito zvakadaro kana kusiiwa.
Basa reVabatsiri. Kana iwe ukashanda bhurogi, taura pane bhurogu, kutumira zvinhu kuWebhusaiti, kutumira zvinongedzo paWebhusaiti, kana neimwe nzira kugadzira (kana kubvumira chero wechitatu kuti aite) zvinhu zvinowanikwa kuburikidza neWebhusaiti (chero zvinhu zvakadaro, "Zviri mukati" ), Iwe une mutoro wakazara wezviri mukati, uye chero kukuvadza kunobva, izvo Zviri mukati. Ndizvo zvazvakaita zvisinei nekuti Zvirimubvunzo zvinoumba mavara, mifananidzo, faira rekuteerera, kana komputa software. Nekuita kuti Zvirimo zviwanikwe, unomiririra uye unobvumidza kuti: kudhawunirodha, kukopa uye kushandiswa kweZviri mukati hakuzotyore kodzero dzevaridzi, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kune copyright, patent, trademark kana trade chakavanzika kodzero, yechero bato rechitatu;
Kana wako mushandi ane kodzero yezvinhu zvepfungwa iwe unogadzira, iwe (i) wakagamuchira mvumo kubva kumushandi wako kugovera kana kuita kuti kuwanike Zvakabatanidzwa, kusanganisira asi kusingakwanisi kune chero software, kana (ii) kuchengetedzwa kubva kumushandi wako kuregererwa Kodzero dzose mukati kana kuChinhu;
Iwe wakanyatsoteerera kune chero mapepa evanhu vatatu ane chokuita neChinyorwa, uye wakaita zvinhu zvose zvakakosha kuti ubudirire kupfuurira kusvika kumashandisi ekupedzisira chero mazwi anoda;
Zviri Mukati hazvina kana kuisa chero mavairasi, minye, malware, Trojan mabhiza kana zvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza;
Zviri Mukati hazvisi spam, haisi mishonga- kana zvisizvo-yakagadzirwa, uye haina zvigadzirwa zvisina kunaka kana zvisingabatsiri zvebhizimisi zvakagadzirirwa kuendesa chitima kune dzimwe nzvimbo dzemasayiti kana kusimbisa nzvimbo yekutsvaga injini dzemasikati evanhu, kana kuti kuwedzera zviito zvisiri pamutemo (zvakadai Se phishing) kana kuti kutsausa vagashiri semugove wezvinyorwa (zvakadai sa spoofing);
Zviri Mukati hazvirevi zvinonyadzisira, hazvina kutyisidzira kana kukurudzira zvechisimba kune vanhu kana masangano, uye hazviputse kuvimbika kana kuti kodzero dzekuparidzira yevamwe vanhu vatatu;
Bhurogi rako harisi kutengeswa kuburikidza nemamwe magwaro asingadiwi e-spam links pazvesigroups, email list, mamwe mablogi uye mawebhu, uye zvimwe zvisina kufanirwa zvinokurudzira nzira;
iwe une, munyaya yeZviri mukati iyo inosanganisira kodhi yekombuta, yakanyatso kukamurwa uye / kana kutsanangura mhando, hunhu, mashandisiro uye mhedzisiro yezvinhu, ingave yakakumbirwa kuita kudaro nebhasikoro kana neimwe nzira.
Nekutumira Zvemukati kuchovha bhasikoro kuti ubatanidzwe paWebhusaiti yako, unopa bhasikoro rezenisi repasirese, remahara, uye risiri rega rekubereka, kugadzirisa, kugadzirisa uye kushambadza Zvirimo nechinangwa chekuratidzira, kugovera uye kusimudzira blog yako. . Kana iwe ukadzima Zvemukati, bhasikoro richashandisa zvine musoro kuedza kuibvisa kubva paWebhusaiti, asi unobvuma kuti caching kana mareferensi eZviri mukati anogona kusaitwa nekukasika kusawanikwa.
Pasina kudzikamisa chero ipi zvayo yezviratidziro kana waranti, bhasikoro rine kodzero (kunyangwe zvisiri izvo zvinosungirwa) kuti, mukuzvibata kwebhasikoro chete (i) kuramba kana kubvisa chero zvirimo izvo, mumaonero emuchovha zvine musoro, zvinotyora chero mutemo wekuchovha bhasikoro kana chero nzira inokuvadza. kana kupokana, kana (ii) kumisa kana kuramba kuwana uye kushandiswa kweWebhusaiti kune chero munhu kana mubatanidzwa chero chikonzero, mukuzvibata kwebhasikoro chete. bikehike haizove nechisungo chekupa kudzoserwa kwemari yakambobhadharwa.
Kubhadhara uye Kuvandudza. General Terms.
Nekusarudza chigadzirwa kana sevhisi, unobvuma kubhadhara bhasikoro iyo imwe-nguva uye / kana yemwedzi kana yegore yekunyorera yekubhadhara mari inoratidzwa (yekuwedzera mazwi ekubhadhara anogona kuverengerwa mune kumwe kutaurirana). Kubhadhara kubhadharira kuchabhadharwa pa-pre-pay base pazuva raunosaina kuKukwidziridza uye ichavhara kushandiswa kwesevhisi iyo yemwedzi kana yegore yekunyorera nguva sezvakaratidzwa. Kubhadhara hakudzoserwe.
Kunze kwekunge iwe wazivisa kuchovha bhasikoro isati yapera nguva yekunyorera yaunoda kudzima kunyorera, kunyorera kwako kunozozvivandudza uye iwe unotipa mvumo yekutora iyo-ino shanda yegore kana yemwedzi yekunyorera yekunyorera kwakadaro (pamwe nechero mutero) uchishandisa chero kadhi rechikwereti kana imwe nzira yekubhadhara yatinayo pane rekodhi yako. Kukwidziridzwa kunogona kukanzurwa chero nguva nekuendesa chikumbiro chako kubhasikoro nekunyora.
Services. Fees; Payment. Nekusaina kuakaundi yeSevhisi unobvuma kubhadhara bhasikoro mari inodiwa yekuseta uye muripo unodzokororwa. Mari inobhadharwa ichaiswa invoice kutanga kubva pazuva rakagadzwa masevhisi ako uye pamberi pekushandisa masevhisi akadaro. bikehike inochengetera kodzero yekuchinja mari yekubhadhara uye muripo pamazuva makumi matatu (30) isati yanyorwa chiziviso kwauri. Masevhisi anogona kukanzurwa newe chero nguva pamazuva makumi matatu (30) yakanyorwa chiziviso kuchovha.
Support. Kana sevhisi yako inosanganisira kuwana yekutanga email rutsigiro. "Tsigiro yeemail" inoreva kugona kuita zvikumbiro zverubatsiro rwehunyanzvi hwekutsigira neemail chero nguva (nekuedza zvine musoro nekukwira bhasikoro kupindura mukati mezuva rimwe rebhizinesi) maererano nekushandiswa kweVIP Services. “Pakutanga” zvinoreva kuti rutsigiro runotora pekutanga pane rutsigiro rwevashandisi veakajairwa kana emahara bikehike.org masevhisi. Rutsigiro rwese ruchapihwa zvinoenderana ne bikehike standard masevhisi maitiro, maitiro uye marongero.
Basa reVashanyi veWebhusaiti. bikehike haina kuongorora, uye haigone kuongorora, zvese zvezvinhu, kusanganisira komputa software, yakatumirwa kuWebhusaiti, uye haigone kuve nemutoro wezvirimo, kushandiswa kana mhedzisiro. Nekushandisa Webhusaiti, kuchovha bhasikoro hakumiriri kana kureva kuti rinotsigira zvakatumirwa ipapo, kana kuti inotenda kuti zvinhu zvakadaro ndezvechokwadi, zvinobatsira kana kusakuvadza. Iwe une basa rekutora matanho ekuzvidzivirira sezvinodiwa kuti uzvidzivirire iwe nemacomputer ako masisitimu kubva kumavhairasi, makonye, ​​Trojan mabhiza, uye zvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza zvemukati. Iyo Webhusaiti inogona kunge iine zvinogumbura, zvisina kufanira, kana zvimwe zvinopokana, pamwe nezvirimo zvine zvisirizvo zvehunyanzvi, zvikanganiso zvekunyora, uye zvimwe zvikanganiso. Iyo Webhusaiti inogona zvakare kunge iine zvinhu zvinotyora kuvanzika kana kodzero dzekushambadzira, kana kukanganisa pfuma yehungwaru uye dzimwe kodzero dzevaridzi, dzevechitatu mapato, kana kurodha, kukopa kana kushandiswa kunoenderana nemamwe mazwi uye mamiriro, akataurwa kana asina kutaurwa. bhasikoro rinoramba chero mutoro kune chero kukuvadzwa kunobva mukushandiswa nevashanyi veWebhusaiti, kana kubva kune chero kudhawunirodha neavo vashanyi zvemukati zvakatumirwa.
Zvemukati Zvakatumirwa pane Mamwe Mawebhusaiti. Hatina kuongorora, uye hatigone kuongorora, zvese zvezvinhu, kusanganisira komputa software, yakaitwa kuti iwanikwe kuburikidza nemawebhusaiti uye mapeji ewebhu ayo anonongedzerwa nebikehike.org, uye chinongedzo kubikehike.org. bikehike haina chero kutonga pamusoro peaya asiri-bikehike mawebhusaiti uye mapeji ewebhu, uye haina mhosva yezviri mukati kana mashandisiro avanoita. Nekubatanidza kune isiri-bhasikoro webhusaiti kana peji rewebhu, bhasikoro harimiriri kana kureva kuti rinotsigira saiti yakadaro kana peji rewebhu. Iwe une basa rekutora matanho ekuzvidzivirira sezvinodiwa kuti uzvidzivirire iwe nemacomputer ako masisitimu kubva kumavhairasi, makonye, ​​Trojan mabhiza, uye zvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza zvemukati. bikehike inorambidza chero mutoro kune chero kukuvadza kunobva mukushandisa kwako kwemawebhusaiti asiri-bhasikoro uye mapeji ewebhu.
Kutyora kodzero uye DMCA Policy. Sezvo bhasikoro richikumbira vamwe kuti varemekedze kodzero dzayo dzepfuma, inoremekedza kodzero dzepfuma yevamwe. Kana uchitenda kuti zvinhu zviri pairi kana kuti zvakabatanidzwa ne bikehike.org zvinotyora kodzero yako, unokurudzirwa kuzivisa kuchovha bhasikoro zvinoenderana neDigital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. bikehike inopindura kune zvese zviziviso zvakadaro, kusanganisira sezvinodiwa kana zvakakodzera nekubvisa zvinhu zvinokanganisa kana kudzima zvese zvinongedzo kune zvinokanganisa zvinhu. bhasikoro richamisa mushanyi kupinda uye kushandisa Webhusaiti kana, mumamiriro ezvinhu akakodzera, mushanyi akatsunga kudzokorora kutyora kodzero dzekodzero kana mamwe kodzero dzepfungwa dzebhasikoro kana vamwe. Panyaya yekugumiswa kwakadai, bhasikoro haizove nechisungo chekupa kudzoserwa kwemari yakambobhadharwa kune bhasikoro.
Intellectual Property. Chibvumirano ichi hachifambise kubva kubhasikoro kuenda kwauri chero bhasikoro kana wechitatu bato rekuchenjera pfuma, uye zvese zvakanaka, zita uye kufarira mukati uye kune yakadaro pfuma zvinosara (sepakati pemapato) chete nebhasikoro. bikehike. Mamwe marezinesi, masevhisi mamaki, magiraidhi uye marogo anoshandiswa ane chekuita neWebhusaiti anogona kunge ari iwo ekutengesa emamwe mapato echitatu. Kushandisa kwako Webhusaiti hakukupe kodzero kana rezinesi rekubereka kana kushandisa chero bhasikoro kana rechitatu-bato rekutengesa.
Advertisements. bikehike inochengetera kodzero yekuratidza zviziviso pane yako blog kunze kwekunge watenga ad-isina account.
Attribution. bikehike inochengetera kodzero yekuratidzira zvinongedzo zvakaita se'Blog pa bikehike.org,' theme munyori, uye manyorerwo efonti mubhurogi rako rezasi kana bhari.
Partner Products. Nekumisikidza chigadzirwa chemumwe wako (semuenzaniso dingindira) kubva kune mumwe wevatinoshanda navo, unobvumirana nematemu ebasa emudiwa iyeye. Iwe unogona kubuda pamatemu avo ebasa chero nguva nekudzima-activate chigadzirwa chemumwe wako.
Mazita eDomain. Kana iwe uri kunyoresa zita rezita, uchishandisa kana kuendesa zita rakambonyoreswa rezita, unobvuma uye unobvuma kuti kushandiswa kwezita rezita kuri pasi pemitemo yeInternet Corporation yeMazita Akapihwa neNhamba ("ICANN"), kusanganisira yavo. Registration Kodzero uye Mitoro.
Kuchinja. bikehike inochengetedza kodzero, pakufunga kwayo chete, kugadzirisa kana kutsiva chero chikamu cheChibvumirano ichi. Ibasa rako kutarisa Chibvumirano ichi nguva nenguva kuitira shanduko. Kuenderera kwako kushandisa kana kuwana iyo Webhusaiti zvichitevera kutumira chero shanduko kuChibvumirano ichi kunosanganisira kugamuchirwa kweshanduko idzodzo. bhasikoro rinogona zvakare, mune ramangwana, kupa masevhisi matsva uye/kana maficha kuburikidza neWebhusaiti (kusanganisira, kuburitswa kwezvishandiso zvitsva nezviwanikwa). Aya maficha matsva uye / kana masevhisi achave ari pasi pemitemo nemamiriro eChibvumirano ichi.
Kugumisa. bhasikoro rinogona kumisa kupinda kwako kune zvese kana chero chikamu cheWebhusaiti chero nguva, paine kana pasina chikonzero, uine kana pasina chiziviso, inoshanda nekukurumidza. Kana iwe uchida kumisa Chibvumirano ichi kana yako bikehike.org account (kana uine imwe), unogona kungorega kushandisa Webhusaiti. Zvisineyi nezviri pamusoro apa, kana uine akaundi yebasa rakabhadharwa, account yakadaro inogona chete kupedzwa nekuchovha bhasikoro kana ukatyora Chibvumirano ichi uye ukatadza kurapa kutyora kwakadaro mukati memazuva makumi matatu (30) kubva pakuzivisa bhasikoro kwauri; chero zvakadaro, bhasikoro rinogona kumisa Webhusaiti nekukurumidza sechikamu chekuvhara kwesevhisi yedu. Zvese zvisungo zveChibvumirano ichi izvo nehunhu hwazvo zvinofanirwa kurarama mukugumiswa zvichararama kugumiswa, kusanganisira, pasina muganho, zvigadziro zvevaridzi, zvirambidzo zvewaranti, mubairo uye miganhu yemhosva.
Disclaimer yeWaranti. Webhusaiti inopihwa "sezvairi". kuchovha bhasikoro nevanotengesa nevanopa marezinesi pano vanoramba zvirango zvese zvemhando ipi neipi, kutaura kana kurehwa, kusanganisira, pasina kuganhurirwa, waranti yekutengesa, kusimba kune chimwe chinangwa uye kusatyorwa. Kunyange kuchovha bhasikoro kana vatengesi vayo uye vanopa marezinesi, vanoita chero waranti yekuti Webhusaiti ichave isina kukanganisa kana kuti kupinda mairi kuchaenderera kana kusakanganiswa. Iwe unonzwisisa kuti iwe unorodha kubva, kana neimwe nzira kuwana zvirimo kana masevhisi kuburikidza, iyo Webhusaiti pakufunga kwako uye nenjodzi.
Limitation of Liability. Hapana chiitiko chichachovha bhasikoro, kana vatengesi varo kana vanopa marezinesi, vanova nemhosva kune chero nyaya yechibvumirano ichi pasi pechibvumirano chipi nechipi, kuregeredza, mutoro wakasimba kana imwe dzidziso yepamutemo kana yakaenzana ye: (i) chero yakakosha, inongoitika kana inokonzeresa kukuvara; (ii) mutengo wekutengwa kwezvinhu zvinotsiva kana masevhisi; (iii) yekukanganisa kushandiswa kana kurasikirwa kana uori hwe data; kana (iv) kune chero mari inodarika mari inobhadharwa newe kuchovha bhasikoro pasi pechibvumirano ichi mukati memwedzi gumi nemiviri (12) nguva isati yaitwa. bikehike haizove nemhosva yekutadza kana kunonoka nekuda kwezvinhu zviri kunze kwekutonga kwavo. Zviri pamusoro hazvishande kusvika pazvinorambidzwa nemutemo unoshanda.
General Representation uye Warranty. Iwe unomiririra uye waranti yekuti (i) mashandisiro ako eWebhusaiti achange achinyatsoenderana nebhasiketi Yakavanzika Policy, neChibvumirano ichi uye nemitemo yese inoshanda nemirairo (kusanganisira pasina muganhu chero mitemo yemuno kana mirau munyika yako, nyika, guta. , kana imwe nharaunda yehurumende, maererano nemaitiro epamhepo uye zvinogamuchirika, uye kusanganisira mitemo yese inoshanda maererano nekufambiswa kwedata rehunyanzvi rinotumirwa kubva kuUnited States kana nyika yaunogara) uye (ii) kushandisa kwako Webhusaiti hakuzokanganisa kana kukanganisa kodzero yepfuma yemunhu chero yechitatu.
Indemnification. Unobvuma kuregeredza uye kubata bhasikoro risingakuvadzi, makondirakiti aro, uye vanopa marezinesi, uye vatungamiriri vavo, maofficial, vashandi nevamiriri kubva uye vachipokana nezvese uye zvese zvikumbiro uye mari, kusanganisira muripo wemagweta, kubva mukushandisa kwako Webhusaiti, kusanganisira asi kwete kugumira pakutyora kwako Chibvumirano ichi.
Miscellaneous. Chibvumirano ichi chinoumba chibvumirano chese pakati pekuchovha bhasikoro newe maererano nenyaya yacho, uye zvinogona kugadziridzwa chete neshanduro yakanyorwa yakasainwa nemukuru ane mvumo yekukwira bhasikoro, kana nekutumirwa nebhasikoro yeshanduro yakadzokororwa. Kunze kwekunge chiyero chinoshanda chemutemo, kana chiripo, chinopa neimwe nzira, Chibvumirano ichi, chero kuwana kana kushandiswa kweWebhusaiti kunotongwa nemitemo yenyika yeCalifornia, USA, isingabatanidzi kupesana kwayo kwemitemo, uye nzvimbo yakakodzera chero makakatanwa anomuka kubva kana ane chekuita neapi akafanana achave ehurumende nematare edzimhosva ari muSan Francisco County, California. Kunze kwezvichemo zvekuyamura kana kuenzana kana zvichemo zvine chekuita nekodzero dzezvivakwa (izvo zvinogona kuunzwa mudare ripi neripi rine kodzero pasina kutumirwa kwebhondi), chero gakava rinomuka pasi peChibvumirano ichi rinozopedzisirwa maererano neComprehensive Arbitration Mitemo ye. Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) nevamiriri vatatu vakagadzwa maererano neMitemo yakadaro. Kupopotedzana kuchaitika muSan Francisco, California, mumutauro weChirungu uye mutongo wekupokana unogona kutevedzerwa mudare ripi neripi. Bato riripo mune chero chiito kana kuenderera mberi kwekushandisa Chibvumirano ichi richava nekodzero yemitengo uye muripo wemagweta. Kana chimwe chikamu cheChibvumirano ichi chikabatwa chisiri chechokwadi kana kuti chisingaite, chikamu ichocho chichatorwa sekuratidzira chinangwa chevatambi, uye zvikamu zvasara zvicharamba zviri musimba rizere. A waiver nerimwe bato chero nguva kana mamiriro Agreement ichi kana chero kutyorwa kwacho, chero imwe muenzaniso, haazoregi mashoko akadaro kana mamiriro kana chero anotevera kutyorwa kwayo. Iwe unogona kupa kodzero dzako pasi peChibvumirano ichi kune chero bato rinobvumirana, uye rinobvuma kusungwa ne, zviga nemamiriro ayo; bikehike inogona kupa kodzero dzayo pasi peChibvumirano ichi pasina mamiriro. Chibvumirano ichi chichange chichisungirirwa uye chichaita kuti zvibatsire mapato, vatevedzeri vavo uye mabasa anobvumirwa.